Nangingiana ny andiany faha-26: navotan’i Sisca sy i Fandrama ny lazan’ny «Festival Donia » | NewsMada
Na i Sisca na i Fandrama no mamarana hatrany ny andiam-pampisehoana nandritra izay andiany maro izay . Soa fa mbola teo izy ireo, nitarika ny mpankafy ary mamelona hatrany ny “Festival Donia”, hetsika tsy afa-misaraka amin’ny tantaran’i Nosy Be.
Nikatona ny alahady alina teo ny andiany faha-26 tamin’ny “Festival Donia”. Toa ny mahazatra nandritra izay andiany maro izay, i Fandrama sy ny tariny no nanakatona izany. Efa fotoana ifanomezana isaky ny faran’ny “Donia” izy ity, ka tsy nahasakana ny mpankafy ao Nosy Be ny hatsiaka sy ny orana tsy nampoizina. Tsy heno firy rahateo izany rehefa tena nampiakatra ny hafanana ry Bemamy sy ny tariny, izay niezaka hatrany namaly ny hetahetan’ireo mpankafy azy.
Araka ny efa nanampoizana azy, ny alin’ny asabotsy no maro mpijery indrindra tao amin’ny kianjan’Ambodivoanio. Azo antoka avy hatrany fa tonga hijery an’i Sisca izy ireo. Tanora maromaro, nanao fehiloha mena izay nozaraina teo am-pidirana no nifamotoana hifety, io alina io. Tsy nisy niala na ry Sisca na ireo mpankafy, hany ka efa tamin’ny 5 ora maraina vao nisaraka ny rehetra.
Fotoana efa ifanomezana ihany koa ny an’ny tarika AmbondronA sy ireo mpankafy ao Nosy Be. Vitsivitsy ny mpijery, saingy tsy nangina kosa ny fotoana niakaran-dry zalahy ny sehatra. Tsikaritra fa efa misy ireo niandry fotsiny ny fandalovan’ny tarika any an-toerana, hifampizara gadona hafa ankoatra ny mahazatra.
Hany nisongadina tamin’ireo mpanakanto vao nisondrotra i Jhon Mc, satria nahaliana ny mpijery ny hahita azy mivantana. Mpanakanto mbola tanora dia tanora, avy any amin’ny faritra Sava ary mivoy ny karazana salegy ihany izy. Efa fantatry ny mpijery ny hirany toa ny “Tsy mavozo la guerre”, ary mihetsika dia mihetsika miaraka amin’ireo mpandihiny i Jhon Mc. Azo antoka fa hanana ny hoaviny izy, aoriana kely…
Maro ireo nandiso fanantenana
Zara raha nisy mpijery ny andro roa voalohan’ny “Donia” andiany faha-26. Asa na nisy fiantraikany tany amin’ireo mpanakanto izany, satria dia maro koa no nandiso fanantenana. Voalohany tamin’izany i Dalvis, izay tena tsy arakaraka ny fampanantenana mialoha nataony tao anaty “Facebook” mihitsy ny seho natolony. Kivy tamin’ny havitsian’ny mpijery?
Noheverina ho maro mpijery ihany koa ny andro faharoa, ny zoma, satria nifandimby an-tsehatra tamin’io i Jerry Marcoss sy i Janga Ratah. Indrisy, iny angamba ny seho tsy nisy mpijery indrindra tamin’ny tantaran’ny “Festival Donia”. Efa tsy manaitra ny mpankafy intsony ve ry Jerry Marcoss? Fanontaniana mipetraka.
Tsy nafana rahateo ny sehatra nialoha izany, satria dia toa ireny nihira an’efitra foana ireny ny tarika Rassiga, any vahiny avy any ivelany nandray anjara tamin’iny andiany faha-26 iny. Tsy nisy na hira iray aza mba fantatry ny mpijery mialoha. Tsy tafiditra tamin’izy ireo rahateo ny gadona pop rock izay nentin’ireto vahiny renioney ireto.
Nanao izay ho afany ihany koa i Lys Chagliss, mpanakanto avy any Mahajanga, saingy tsy nahazo na tehaka tamin’ny mpijery aza. Sady tsy nisy mpitendry rahateo nanaraka azy ka toa ngeza loatra ho an’ity mpanakanto ity ny sehatra. Soa fa navotan’i Smaven izany, ka mba takontakona teo.
Nialoha ny niakaran’i Fandrama ny andro farany, mbola nahakivy ihany ny niseho. Tsy araka izay niheverana azy ny seho nataon-dry Omary sy Harrys, izay zanak’i Nosy Be. Asa na vokatry ny tahotra nahita ireo mpijery, na tsy ampy fiomanana mihitsy ito farany, fa dia tsy tafiditra hatramin’ny farany tanatin’ny fampisehoana. Niezaka nanarontsarona izany ihany ireo mpitendry nanaraka azy.
Mila harenina haingana ny lesoka
Nandalo sedra maro ny “Festival Donia”, nandritra izay andiany taona maro nodiaviny izay… Mbola nahadingana soa aman-tsara ny andiany faha-26 ihany, na dia efa tsy takona hafenina aza ny olana sedrain’ity hetsika ara-kolontsaina anisan’ny nalaza indrindra taty amin’ny faritry ny ranomasimbe Indianina ity. “Tsy maintsy misy hatrany ny Donia, raha mbola ilain’i Nosy Be ny fisiany. Nandalo krizy maro fa tsy mbola nitolefika na dia eo aza ireo sakantsakana mahazo ny festival Donia”, hoy ny teny fampidirana nataon’i Daniel Boisson, izay filohan’ny Cofestin am-perinasa. Toa azy koa, maniry ny hitohizan’ny “Festival Donia” hatrany ireo nifandimby nandray fitenenana tamin’ny lanonam-panokafana.
Tsapa kosa anefa fa raha te hiverina amin’ny lazany taloha na hihoatra an’izany, fotoana izao hitondrana fanarenana ho an’ity hetsika ara-kolontsaina mampiavaka an’i Nosy Be ity. Eo ny lafiny fikarohana mpanohana, fa anisan’ny ilain’ny “Donia” ihany koa ny fiverenan’ny hetsika ho ao am-pon’ny mponin’i Nosy Be, satria izy ireo no “mpanohana voalohany”.
Mila ezaka kosa ny fikarakarana, indrindra eo amin’ny lafiny artistika sy ny fisafidianana ireo mpanakanto handray anjara. Eo koa ny lafiny fampahafantana ny hetsika, izay tsikaritr’ireo vahiny sy tompon-tany fa tsy ampy mihitsy tamin’ity andiany ity. Manantena fiovana mankany amin’ny fanatsarana amin’ny andiany manaraka!